Ireo fepetra sy fepetra mifandraika amin'izany, miaraka amin'ny politikantsika tsy miankina, dia mifehy ny fampiasana anao amin'ny tranonkala www.mh-chine.com (tranokala / tranonkala), na ho vahiny na mpampiasa iray voasoratra. Azafady vakio amim-pitandremana ireo fepetra sy fepetra ireo alohan'ny hanombohanao mampiasa ilay tranonkala. Amin'ny fampiasana ny tranokalanay, dia asehonao fa manaiky ireo fepetra sy fepetra ianao ary manaiky ny hitazona azy ireo. Raha tsy manaiky ireo fepetra sy fepetra ireo ianao, dia miangavy anao hiala amin'ny tranonkala.
Raha manana fanontaniana mikasika azy ireo ianao na tsy te-hanaiky azy ireo, azafady mba mifandraisa amin'ny sekreteran'ny orinasanay amin'ny 86-574-27766888 alohan'ny hampiasana ity tranonkala ity.
Azontsika atao ny manova ireo fepetra sy fepetra na politikantsika manokana amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fanavaozana ity pejy ity. Tokony hijery ity pejy ity ianao indraindray mba hijery ireo fepetra sy fepetra ireo mba hahazoana antoka fa faly amin'ny fanovana rehetra ianao. Ny fampiasana na ny fidirana an'ity tranonkala ity dia manondro ny fanekenanao ireo fepetra sy fepetra ireo. Raha tsy manaiky ireo fepetra sy fepetra ireo ianao dia aza ampiasaina ity tranonkala ity.
Fampahalalana momba anay
Ny birao vaovaontsika dia ao amin'ny #18 Ningnan North Road, Ningbo, Sina.
Afaka mifandray aminay amin'ny alàlan'ny finday amin'ny + 86-574-27766888 ianao na amin'ny alàlan'ny mailaka ao .
Ny vohikala izay ampiharana ireo fepetra sy fepetra ireo ary tompon'andraikitra amin'izany dia ny www.mh-chine.com.
Ny fampiasanao an'ity tranonkala ity
Ny fahafahana miditra amin'ny tranokalanay dia avela amin'ny fotoana voafetra, ary miaro ny zo hanala na hanova ny fanompoana atolotsika ao amin'ny tranokalanay tsy misy filazana. Tsy hizaka andraikitra izahay raha toa ka tsy misy na inona na inona ny toerana misy anay na oviana na oviana.
Azontsika atao ny mametra ny fidirana amin'ny ampahany sasany amin'ny tranokalantsika, na ny tranonkalanay manontolo, amin'ireo mpampiasa voasoratra anarana aminay.
Ity tranonkala ity sy ireo fitaovana rehetra voarakitra ao dia miaro amin'ny zo ara-tsaina, anisan'izany ny zon'ny mpamorona, ary na antsika na ny fahazoan-dàlana hampiasaintsika. Ny fitaovana dia ahitana, fa tsy voafetra ny, ny drafitra, ny drafitra, ny fijery, ny endrika, ny sary, ny sary, ny horonan-tsary sy ny antontan-taratasy ao amin'ny tranonkala, ary koa ny votoaty hafa toy ny lisitra vidiny, lahatsoratra, tantara ary lahatsoratra hafa.
Tsy azonao atao ny mandefa kopia, mamerina, mamoaka na mametraka ny fitaovana ao amin'ity tranonkala ity ho an'ny olon-kafa raha tsy misy ny fanekenay an-tsoratra.
Azonao atao ny manonta na mamintina ireo fitaovana avy amin'ity tranonkala ity raha toa ka:
• Tsy misy fanovana ny fomba rehetra;
• Tsy misy sary, sary na lahatsary no ampiasaina ao anatin'ilay andininy;
• Ny fampitam-baovao momba ny zon'ny mpamorona sy ny marika momba ny marika dia miseho amin'ny dika mitovy ary manaiky ity tranonkala ity ho loharanon'ny fitaovana; ary
• Ny olona izay omenao ireo fitaovana ireo dia mahatsapa ireo fepetra ireo.
Tsy tokony hampiasa ny ampahany amin'ireo fitaovana ao amin'ny tranokalantsika isika amin'ny tanjona ara-barotra raha tsy mahazo fahazoan-dàlana hanao izany avy amintsika na avy amin'ireo mpamatsy antsika, raha mety.
Fampiharana sy fitaovana fanofanana
Ny tranokalanay dia mamela ny fidirana sy ny fampiasana ireo kaompania an-tserasera, anisan'izany ny Seamwork + sy Coats Count (ny "App"). Ny karazan-kajy isan-karazany dia samy manana ny asany ary ny mpampiasa dia tokony hampiasa ny kalkadora mifototra amin'ny vokatra ilain'ny mpampiasa. Ohatra avy amin'ny fahaiza-manaon'ny kalkera dia ahitana ny fanombanana ny fihenan'ny kofehy ary ahafahana manombana ny lanjan'ny kofehy sy ny famerenana ny kofehy sy ny kofehy ho an'ny rafitra.
Ankoatr'izay, ny tranokalanay dia manome ny mpampiasa mampiasa fitaovana fampiofanana (ny "fitaovam-panofanana") izay ahitana fa tsy voafetra ny fampiofanana video.
Tsy maintsy mamaky, manaiky ary manaraka izany teny izany ianao amin'ny fampiasana ny fitaovana App sy Training.
Mba hampiasana ny App sy / na ny fitaovana fanofanana dia omenay fahazoan-dàlana hampiasa ny fitaovana App sy Training ianao ho an'ny raharaham-barotra anatiny. Ity fahazoan-dàlana ity dia manokana ary voafetra ho anao irery ary noho izany dia tsy azo avadika.
Azonao atao ny mizara na mametraka ny fitaovana App sy ny fanofanana azo ampiasaina amin'ny tambajotra iray izay ahafahan'ny fitaovana maro amin'ny fotoana iray ampiasaina.
Azonao atao ny mandefa kopia, manaparitaka, manova ny injeniera, manilika, manandrana mamoaka ny fehezan-dalan'ny loharano, manova na mamorona asa avy amin'ny App sy / na ny fitaovana fanofanana na ny ampahany aminy.
Amin'ny fampiasana ny fitaovana App sy fanofanana, manaiky ianao ary manaiky fa:
• Ny fitaovana fampiharana sy / na fanofanana dia tsy natao hahazoana fampahalalana fotsiny; ary
• Tsy manome antoka na fanomezan-toky isika momba ny fahamarinan'ny fampahalalana voarakitra ao amin'ny fitaovana fampiofanana na fampahalalan'ny App. Ny fampiasana ity App io sy ny vokatra azo avy amin'izany dia natao ho tari-dalana ary tsy manome tolotra, faktiora, fanasana hitsabo na mitovy.
Raha toa ka mandrindra ny angon-drakitra manokana ho anareo izahay rehefa manao ny adidinay amin'ny fifanarahana io, dia asehontsika tsirairay avy ny tanjontsika fa (na ny mpampiasa anao, raha mety) dia ny mpanara-maso ny data ary isika dia amin'ny processeurs data ary amin'ny tranga toy izany :
• Manaiky sy manaiky ianao fa ny angon-drakitra manokana dia mety hampindrana na hitahiry any ivelan'ny faritra ara-toekarena Eoropeana na any amin'ny firenena misy anao, raha ilaina, mba ahafahana manome ny asan'ny App sy ny adidintsika hafa ao anatin'ity fifanarahana ity;
• Hahazo antoka fa ianao dia manan-jo handefa ireo angona manokana ho anay, mba hahafahantsika mampiasa sy mandamina ary mandidy ny angon-drakitra manokana araka ny fifanarahana momba anao.
• Ho azonao antoka fa ny ampaham-batana voakasika rehetra dia efa nampahafantarina azy, ary nanome ny fankatoavany, fampiasana, fanodinana ary famindrana araka izay takian'ny lalàna fiarovana rehetra momba ny fiarovana;
• Hanaovana ny angon-drakitra manokana isika raha tsy mifanaraka amin'ity fifanarahana ity, ny fepetra sy ny fepetra ary ny politika manokana momba ny tsiambaratelo, ary ny torolàlana rehetra nomen'ny lalàna anao indraindray; ary
• Samy mandray fepetra ara-teknika sy ara-pitondran-tena isika rehetra mikasika ny fanodinana tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna ny angon-drakitra manokana na ny fahaverezany, ny fandravana na ny fahavoazana.
Ny andraikitsika aminao
Ireo fepetra sy fepetra ireo dia tsy manaisotra ny andraikitsika (raha misy) aminareo:
• famonoana olona na fahafatesana vokatry ny tsy fahampiantsika;
• izay zavatra rehetra mety ho tsy ara-dalàna ho antsika hanilihana na hanandrana hanaisotra ny andraikitsika.
Tsy manome antoka isika fa ity tranonkala ity dia mety ho azo ampiasaina amin'ny rehetra na izay fitaovana sy rindrambaiko azonao ampiasaina. Tsy manome antoka isika fa ity tranonkala ity dia ho afaka amin'ny fotoana rehetra na amin'ny fotoana voafaritra. Manakana ny zo hanala na hanova ity tranokala ity amin'ny fotoana rehetra.
Tsy mandray ny andraikitsika na inona na inona vokatry ny fampiasana, na fianteherana amin'ny fampahalalana rehetra, fitaovana na fomba amam-panao ao amin'ny tranokala.
Tsy manao fiantohana izahay miaraka amin'ny tranokala, na ireo fitaovana voarakitra ao aminy, ary tsy manao adidy hafa afa-tsy ireo izay voalaza ato anatin'ity fepetra sy fepetra ity ary ny politikantsika manokana.
Ny fitaovana hita ao amin'ny tranokalanay dia omena tsy misy antoka, fepetra na antoka ho amin'ny fahamarinan'izany. Araka ny lalàna navoakan'ny lalàna, izahay, mpikambana hafa ao amin'ny orinasanay sy ireo antoko fahatelo mifandray aminay dia manafoana tanteraka:
• Ny fepetra, ny fepetra rehetra ary ny fepetra hafa izay mety ampiharina amin'ny lalàna, lalàna iombonana na ny lalàna momba ny fitoviana.
Ny andraikitra rehetra:
• mivantana; na
• Fandaniana na vokatry ny fahavoazana na fanimbana nateraky ny mpampiasa rehetra mifandraika amin'ny tranokalantsika na amin'ny fampiasana, ny tsy fahafahana mampiasa, na ny vokatry ny fampiasana ny tranokalantsika, ny tranonkala mifandraika aminy sy ny fitaovana rehetra misy azy, ao anatin'izany, tsy misy famerana ny andraikitra rehetra:
• fahaverezana fidiram-bola na fidiram-bola;
• fahaverezan'ny fandraharahana;
• fahaverezan'ny tombom-barotra na fifanarahana;
• fahaverezan'ny tahirim-by;
• fahaverezan'ny data;
• fahaverezan'ny fankasitrahana;
• fitantanana ny fitantanana na ny birao; ary noho ny fahaverezana hafa na ny fahavoazana na inona na inona, na inona na inona mitranga ary na vokatry ny fanararaotana (na fametahana) (anisan'izany ny fahamendrehana), ny fandikana ny fifanarahana na ny zavatra hafa, na dia efa mialoha aza, raha toa ka tsy manakana ny fitakiana ny fatiantoka na ny fahavoazana ho an'ny fananana azo tsapain-tanana na fanambarana hafa ho an'ny fahavoazana ara-bola mivantana izay tsy voarohiran'ny sokajy voalaza etsy ambony. Tsy misy fiantraikany amin'ny andraikitsika ny fahafatesana na ny fanimbana ataon'ny tena avy amin'ny tsy fahamendrehantsika, na ny andraikitsika noho ny hosoka, ny fanendrikendrehana ny hosoka na ny fahadisoam-panantenana amin'ny raharaha fototra, ary ny andraikitra hafa izay tsy azo esorina na voafetra amin'ny lalàna manan-kery.
Fampahalalana momba anao sy ny fitsidihana ny tranokalanay
Manao fampahalalana momba anao izahay araka ny politikan'ny fiainanao manokana. Amin'ny fampiasana ny tranokalanay, dia manaiky ny fikarakarana toy izany ianao ary manome antoka fa marina daholo ny angona rehetra omenao.
Information ity tranonkala
Raha tsy misy ny fampahafantarana ao amin'ity tranonkala ity dia ny fifanakalozan-kevitra (anisan'izany, tsy misy famerana ny vokatra sy ny fampahafantarana ny vidiny), ny fampahalalana hafa rehetra ato amin'ity tranonkala ity dia omena amin'ny fampahalalana ankapobeny sy ny tanjon'ny tombontsoa. Na dia miezaka sy miantoka aza ny fampahalalana hita ao amin'ny tranonkala dia marina sy mihatra, dia tsy afaka ny ho tompon'andraikitra amin'ny tsy fahampian'ny fahalalana isika. Vokatr'izany dia tsy tokony hiantehitra amin'ireto fampahalalana ireto ianao, ary mamporisika anao haka torohevitra fanampiny na mitady fitarihana fanampiny alohan'ny hanaovana na hanao zavatra mifanaraka amin'ny fampahalalana hita ao amin'ity tranonkala ity. Ny andraikitsika ho anao, araka ny nohazavaina tetsy ambony, dia mbola tsy voafehin'ity.
Azontsika atao ny mifandray amin'ny tranonkala hafa izay tsy ao anatin'ny fifehezantsika. Tsy tompon'andraikitra amin'ireo tranonkala ireo izahay na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, ary tsy manohana azy ireny. Andraikitrareo ny manamarina ny fepetra sy ny fepetra momba ny fiainana manokana sy ny fiainana manokana ao amin'ny tranokala hafa izay tsidihinao.
Mety tsy hampifandray an'ity tranonkala ity amin'ny tranonkala hafa raha tsy manaraka ny torolalana manaraka ianao:
• Ny rohy dia tsy maintsy amin'ny pejy fandraisana ny tranonkala amin'ny www.mh-chine.com;
• Mety tsy mamorona rafitra na faritra hafa manodidina ny tranokala ianao;
• Ny tranonkala izay tianao hampidirina rohy dia tsy maintsy manaraka ny lalàna sy fitsipika manan-danja rehetra ary tsy tokony ahitana ny votoatiny izay mety heverina ho manelingelina na manafintohina; ary
• Tsy midika izany fa manohana na mampifandray amin'ny tranonkala hafa, vokatra na serivisy isika.
Fifanekena amin'ny aterineto
Ankoatra ny fepetra momba ny varotra an-tserasera izay fanasana hitondrana (fa tsy tolotra), tsy misy na inona na inona atolotr'ity tranonkala ity fa tsy natao ho entina hampiditra fifandraisana mifandraika aminao na amin'olon-kafa, afa-tsy ireo fepetra sy fepetra izay mifehy ny fifandraisana misy eo amintsika amin'ny fampiasana ny tranokala.
Raha manao fifanarahana amin'ny antoko fahatelo izay nomena na voatonona ato amin'ity tranonkala ity ianao, dia andraikitrareo ny miantoka ny fampifanarahanareo amin'ny fepetran'ity fifanekena ity ary mandray toro-hevitra ara-dalàna raha ilaina.
Virosy, fametahana ary heloka hafa
Tsy tokony hampiasa ny tsy fampiasana ny tranokalanay ianao amin'ny fampidirana ny viriosy, tranaona, kankana, baomba lojika na zavatra hafa izay manimba na manimba ny teknolojia. Tsy tokony hanandrana hahazo fidiram-bola tsy nahazoan-dalana amin'ny tranokalantsika isika, ny tranonkala izay itahiranan ny tranokalantsika na server, ordinatera na database mifandraika amin'ny tranokalantsika. Tsy tokony hanafika ny tranokalanay ianao amin'ny alàlan'ny famotsoran-keloka an-tsokosoko na ny famotsorana azy amin'ny fandavoana.
Amin'ny fanitsakitsahana ity fepetra ity, dia hanao heloka bevava ianao ao amin'ny Lalàna Computer Misuse 1990. Hilaza tatitra toy izany amin'ny tompon'andraikitry ny fampiharana ny lalàna izahay ary hiara-miasa amin'ireo manampahefana ireo amin'ny famoahana ny maha izy azy azy ireo. Amin'ny tranga toy izany, ny zòhanao hampiasa ny tranokalantsika dia hitsahatra avy hatrany.
Tsy ho tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana na ny fahavoazana vokatry ny fampiasana ny famoahana ny tolotra, ny viriosy na ny fitaovana hafa mampidi-doza mety hisy fiantraikany amin'ny fitaovana elektronika, programa elektronika, data na fitaovana hafa manan-danja noho ny fampiasanao ny tranokalanay na ho an'ny famandrihanao ny zavatra rehetra voasoratra ao aminy, na amin'ny tranonkala mifandraika amin'izany.
Fitantanam-pitondrana sy juridiction
Ny fanabeazana, ny fisiana, ny fanorenana, ny fahatanterahana, ny fahamendrehana ary ny endrika rehetra na inona na inona amin'ireto fepetra sy fepetra manaraka ireto na ny fe-potoana misy ireo fepetra ireo dia hifehy ny lalàn'i Shina.
Ny fitsarana Shinoa dia hanana fahefana manokana mba hametrahana adihevitra izay mety hitranga na amin'ny fifandraisany amin'ireo fepetra sy fampiasana ny tranonkala.
Legal Home Sokajy --Threads --Zippers - Ripona & Tape --Ropes --Laces --Buttons --Interlining --Tassel & Fringe / Trimming - Fanampiana fitaovana - Fitaovana & Accessories - Mamboatra machine & Parts --Fabric --Others Momba anay - MH Overview --MH Industrial --- Ny orinasa mpamokatra --- Zava-bozaka & andian-tavoahangy --- Hazo fijinjana --MH Tantara --Trade Shows --Image Galleries --Video Album Mifandraisa aminay - Toerana mahomby --Feedback Community --App --Avia ho namanay